ကျေးဇူးရှင်မိဘနှစ်ပါးကို ဗုဒ္ဓဂါယာသို့ ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျလိုက်ပါပို့်ဆောင်ပေးရတဲ့အတွက် ဝမ်းသာကြည်နူးပီတိဖြစ်နေတဲ့ အေးမြတ်သူ – Khit Lunge
ကျေးဇူးရှင်မိဘနှစ်ပါးကို ဗုဒ္ဓဂါယာသို့ ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျလိုက်ပါပို့်ဆောင်ပေးရတဲ့အတွက် ဝမ်းသာကြည်နူးပီတိဖြစ်နေတဲ့ အေးမြတ်သူ
ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ပါးချိုင့်လေးကို ပိုင်ဆိုင်ထားသူကတော့ သရုပ်ဆောင် မင်းသမီးချောလေး အေးမြတ်သူပါ။ သူမဟာ အသက် ၃၀ ကျော်လို့ ထင်ရက်စရာမရှိရလောက်အောင်ကို နုပျိုနေဆဲပါ။ အနုပညာလမ်းကြောင်းမှာလည်း အောင်မြင်ကျော်ကြားတဲ့ ထိပ်တန်းမင်းသမီးလေးတစ်လက်အဖြစ် ရပ်တည်နေတာပါ။
မမြတ်လေးဟာ မိဘကျေးဇူးကို သိတတ်လွန်းတဲ့သမီးတစ်ယောက်ဖြစ်တာကြောင့် ပရိသတ်တွေသာမကပဲ အနုပညာရှင်များကပါ ချီးကျူးရတဲ့ အထိပါပဲ။ လက်ရှိမှာလည်း တစ်ကိုယ်တည်း အပျိုကြီးဘဝနဲ့ မိဘနှစ်ပါးကိုလုပ်ကျွေးပြုစုနေတာပါ။ အခုမှာလည်း ကျေးဇူးရှင် မိဘနှစ်ပါးကို ဗုဒ္ဓဂါယာသို့ ကိုယ်တိုင်လိုက်ပိါပို့ဆောင်နေတာပါ။
ဒီပုံရိပ်လေးတွေကိုလည်း သူမရဲ့ လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာတွင် ပရိသတ်တွေအတွက် ဝေမျှထားတာပါ။ မမြတ်လေးကတော့ ” ဖေလည်းပျော် . …မေလည်းပျော် တော့ …သားသမီးတွေလည်းပျော်ပြီပေါ့ ….
ဘဝကခက်ခဲပင်ပန်းခဲ့ပေမယ့်ဒီအဖေ/ဒီအမေရဲ့သားသမီးတွေဖြစ်ရတာကျေနပ်ပါတယ် …. သူငယ်ချင်းနှင့်တူသောမိဘ @ Bodh Gaya ” ဆိုပြီး ရေးသားထားတာပါ။ ပရိသတ်တွေအတွက် မမြတ်လေးရဲ့ ခရီးသွားပုံရိပ်လေးတွေကို တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။
ကြေးဇူးရှငျမိဘနှဈပါးကို ဗုဒ်ဓဂါယာသို့ ကိုယျတိုငျကိုယျကလြိုကျပါပိျု့ဆောငျပေးရတဲ့အတှကျ ဝမျးသာကွညျနူးပီတိဖွဈနတေဲ့ အေးမွတျသူ
ခဈြစရာကောငျးတဲ့ ပါးခြိုငျ့လေးကို ပိုငျဆိုငျထားသူကတော့ သရုပျဆောငျ မငျးသမီးခြောလေး အေးမွတျသူပါ။ သူမဟာ အသကျ ၃၀ ကြျောလို့ ထငျရကျစရာမရှိရလောကျအောငျကို နုပြိုနဆေဲပါ။ အနုပညာလမျးကွောငျးမှာလညျး အောငျမွငျကြျောကွားတဲ့ ထိပျတနျးမငျးသမီးလေးတဈလကျအဖွဈ ရပျတညျနတောပါ။
မမွတျလေးဟာ မိဘကြေးဇူးကို သိတတျလှနျးတဲ့သမီးတဈယောကျဖွဈတာကွောငျ့ ပရိသတျတှသောမကပဲ အနုပညာရှငျမြားကပါ ခြီးကြူးရတဲ့ အထိပါပဲ။ လကျရှိမှာလညျး တဈကိုယျတညျး အပြိုကွီးဘဝနဲ့ မိဘနှဈပါးကိုလုပျကြှေးပွုစုနတောပါ။ အခုမှာလညျး ကြေးဇူးရှငျ မိဘနှဈပါးကို ဗုဒ်ဓဂါယာသို့ ကိုယျတိုငျလိုကျပိါပို့ဆောငျနတောပါ။
ဒီပုံရိပျလေးတှကေိုလညျး သူမရဲ့ လူမှုကှနျယကျစာမကျြနှာတှငျ ပရိသတျတှအေတှကျ ဝမြှေထားတာပါ။ မမွတျလေးကတော့ ” ဖလေညျးပြျော . …မလေညျးပြျော တော့ …သားသမီးတှလေညျးပြျောပွီပေါ့ ….
ဘဝကခကျခဲပငျပနျးခဲ့ပမေယျ့ဒီအဖေ/ဒီအမရေဲ့သားသမီးတှဖွေဈရတာကနြေပျပါတယျ …. သူငယျခငျြးနှငျ့တူသောမိဘ @ Bodh Gaya ” ဆိုပွီး ရေးသားထားတာပါ။ ပရိသတျတှအေတှကျ မမွတျလေးရဲ့ ခရီးသှားပုံရိပျလေးတှကေို တငျဆကျပေးလိုကျပါတယျ။